Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion Kuuya kuPad ​​munaKurume | IPhone nhau
Iwe unofarira sarudzo mitambo here? Feral Inopindirana Yakazivisa , que kufora uku kuchavhurwa Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion muIpad App Store, inova yekuwedzera pack ye Roma: Yakazara Hondo, mutambo unotarisirwa kwazvo wakasvika, kana kuti pane kuendeswa, kuIOS pakupera kwa2016. Uye ndezvekuti izvo zvasvika kuPadad zvinenge zvakafanana nezvanga zviripo zvePC.
Kufanana nemutambo wepakutanga wakasvika mukupera kwa2016, iyo kuwedzera Bharbar Invasion inovimbisa kuve a poti mutambo wepakutanga wese iyo yaitovepo yemakomputa, asi neshanduko ine musoro inodiwa kuti zvikwanise kuidzora ine intuitive yekubata zvekubata, yakagadziridzwa mifananidzo yeRetina kuratidza uye auto-chengetedza pakati pehondo, yekupedzisira chimwe chinhu chandisingazive kana ini pachedu senge (Tinogona kugara tichinyengera kana tikasarudza kuti inguva ipi yekuchengetedza).
Kuwedzera kweBarbarian Invasion kuri kuuya Roma: Yakazara Hondo uye kune iyo iPad munaKurume
Bharabhari Invasion mutambo wematanho epiki, unopa vatambi kusanganisa kusingagumi kwesarudzo nematekiniki ekurwa hondo dzinoshamisa, uku vachishandisa diplomacy, hunyengeri, uye kuuraya kutonga nyika yekare. Nemushandirapamwe wakagadzwa mumakore ari kudzikira ehushe hweRoma, vatambi vanogona kukurumidza kupunzika kwavo semutungamiriri wechihedheni kana kutora zvombo semutungamiriri weRoma kuti vawedzere budiriro yavo muzera idzva rine mbiri.
Kusiyana nemimwe mitambo iyo, kubva pakuona kwangu uye kwevakawanda, inopa zvishoma zvishoma pamutengo wakakwirira kwazvo, Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion ichauya iyo iyo iPad, uye pakutanga chete kune iPad (kana kune iyo iPhone kana kune Android), iine mutengo we € 4.99, inova hafu yemutengo wepakutanga uye mutambo wakazara wakazoburitswa kupera kwa2016. Tichakwanisa kutamba kuwedzera kweBarbarian Invasion pasina mutambo uyo watovepo muApp Store. Uchazvitenga here?
Yakazara nzira kuchinyorwa: IPhone nhau » iPhone » dzakawanda » Roma: Yakazara Hondo - Bharabhari Invasion Inouya kuPad ​​munaKurume